भोलि ४ कार्तिक २०७८ बिहिबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल ! – List Khabar
Home / जीवनशैली / भोलि ४ कार्तिक २०७८ बिहिबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
भोलि ४ कार्तिक २०७८ बिहिबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
admin October 20, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 261 Views
तपाईको दिन अनुकुलताले भरिपूर्ण रहनेछ । हातमा लिएको सबै काममा सफलता मिल्दा मनमा हर्ष र प्रसन्नता रहनेछ । आर्थिक क्षेत्रमा तपाईको दिन लाभदायक साबित होला । उत्तम वस्त्र र भोजन मिल्नेछ ।
तपाईको मन अनेक प्रकारको चिन्ताले घेरिरहनेछ । तपाईको स्वास्थ्य मध्यम रहला विशेषगरी आँखामा पीडा होला आफन्त र परिवारसँग मनमुटाव होला । अधिक मात्रामा खर्च होला । उचित पारिश्रमिक नमिल्दा मनमा निराशा उत्पन्न होला ।
तपाईको दिन विभिन्न लाभ प्राप्त हुनेवाला छ । परिवारमा श्रीमती र छोराको तर्फबाट लाभ प्राप्त होला । मित्रसंगको भेटले मन आनन्दित रहनेछ । विवाह गर्न उत्सुक व्यक्तिले जीवनसाथीसँग भेट हुनेछ आनन्द दायक यात्रा हुने योग छ ।
पेसा वा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको लागि दिन लाभदायक छ । पेसागत व्यक्तिले उच्च पदाधिकारीको कृपा दृष्टिको कारण पदोन्नति होला आमासँग सुमधुर सम्बन्ध रहनेछ । सरकारको तर्फबाट लाभ र सांसारिक सुख वृद्दि होला ।
तपाईको दिन मध्यम फलदायी होला । धार्मिक र मांगलिक कार्यमा उपस्थित हुनुहुनेछ । धार्मिक यात्राको आयोजन होला । स्वास्थ्य मध्यम रहनेछ । विदेशमा रहने आफन्तको समाचार प्राप्त होला। उच्च अधिकारीसँग सावधानीपुर्वक व्यवहार गर्नुहोला ।
नयाँ काम सुरु नगरेकै ठिक होला । बाह्य खाद्य पदार्थ सेवन गर्दा स्वास्थ्य खराब हुन सक्ला । पारिवारिक सदस्यसँग मनमुटाव हुन सक्ला । पानीबाट टाढा नै रहनुहोला । उचित पारिश्रमिक नमिल्दा मन उदास रहनेछ ।
तपाईको दिन सफलता र् आनन्दमा बित्नेछ । सार्वजनिक जीवन सम्बन्धि कार्यमा सफलता र सिद्दी मिल्नेछ । विशेषगरी विपरित लिंगीय व्यक्ति तपाईको जीवनमा छाईरहनेछ । शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहला ।
आकस्मिक घटना घट्नेछ । तपाईको हातमा आएको अवसर गएको अनुभव होला। पारिवारिक सदस्यसँग मतभेद होला। माइती पक्षबाट खबर प्राप्त होला नयाँ कार्य योजनाको आरम्भ नगर्नुहोला । विरोधी प्रतिस्पर्धीबाट बच्नुहोला ।
तपाईको दिन मिश्र फलदायी रहला । पेट सम्बन्धि समस्याले सताउनेछ । सन्तानको स्वास्थ्य र पढाईको सम्बन्धमा चिन्ताले मन निराश रहनेछ । कार्य सफलता नमिल्दा क्रोधित रहनुहुन्छ । साहित्य र लेखन क्षेत्रमा रुची रहनेछ ।
तपाईको दिन प्रतिकुलतामय रहला। जसकारण मनमा खिन्नता अनुभव होला शरीर मा स्फूर्ति र ताजगी रहला। सार्वजनिक जीवनमा मानहानी होला । छातीमा पिडा होला । स्त्री मित्र सँग काम गर्ने मौका प्राप्त होला ।
तपाई तन -मनबाट प्रसन्न रहनुहुन्छ । मनमा छाएको चिन्ताको बादल टाढा हुनाले उत्साह बढ्नेछ । छोटो यात्रा होला मित्र तथा आफन्तसंग भेट हुँदा मन प्रसन्न रहनेछ । कार्यक्षेत्रमा प्रभावकारी परिणाम प्राप्त होला।
रिसको कारण कसैसँग झगडा वा मनमुटाव होला । शारीरिक कष्ट अनुभव होला । विशेष रुपले आँखाको ध्यान राख्नुहोला । पारिवारिक सदस्य र प्रेमीजनद्वारा घरमा विरोधको वातावरण बन्नेछ । खानपिनमा ध्यान राख्नुहोला ।
Previous छोरीले आफ्नो इच्छा विपरित प्रेम विवाह गरेको भन्दै बावुले आफ्नै परिवारका ७ जनालाई ज्युँदै ज’लाए
Next श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर दोब्बर उमेरका ससुरासँग बिहे !